वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै आगामी सन् २०३० सम्ममा अमेरिकामा २५ प्रतिशतले मृगौला रोगीको संख्यामा कमी ल्याउने घोषणा गरेका छन् ।
ट्रम्पले मोदीलाई भने – यति राम्रा पत्रकार कँहाबाट ल्याउनुभयो ?
काठमाडौँ । 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच फेरी भेटवार्ता भएको छ । यो भेटवार्तामा ट्रम्पले पत्रकारहरुप्रति गरेको टिप्पणीका कारण चर्चामा रहेको छ
राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया शुरु, के हो पुरा प्रकरण ?
वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख नेन्सी पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया शुरु भएको घोषणा गरेकी छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि डेमोक्रेट
राष्ट्रसंघमा ट्रम्पले भने- भविष्य ‘विश्ववादी’को होइन, ‘देशभक्त’ को हुनेछ
संयुक्त राष्ट्रसंघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी व्यवस्थामाथि नयाँ आक्रमण गर्दै मङ्गलबार विश्ववादीहरूले नजित्ने बताएका छन् । राष्ट्रसंघमा सम्वोधन गर्दै उनले भने, “भविष्य विश्ववादीको नभै देशभक्तको हुनेछ ।” उनले थपे, “भविष्य
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिने सिलसिलामा न्यूयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भएदेखि नै सुल्झन बाँकी रहेका अनगिन्ती विदेश नीतिहरुको सूची राष्ट्रपति ट्रम्पसँग अझै